Ama-cryptocurrensets: i-Bitcoin, i-Ethereum, i-Litecoin, i-Dash, ... konke mayelana nama-cryptos | Izindaba zamagajethi
El umhlaba we-cryptocurrencies kuya ngokuqina nsuku zonke. Eminyakeni embalwa eyedlule inani labatshalizimali kuma-cryptocurrensets lalilincane impela kepha nsuku zonke abantu abaningi bayangena kulolu shintsho oluguqula ukufakwa kwemali emakethe yezimali.
Uyazi ukuthi yini iBitcoin? Ungayithanda? thenga ama-Bitcoins? Ingabe uyazi yini i-ethereum Futhi uyawazi amandla le pulatifomu engakunika yona? Yini imfoloko yeBitcoin? Uyini umehluko phakathi kweBitcoin neBitcoin Cash? Iyini imali yeLitecoin futhi yehluke kanjani kuneBitcoin? Yini i-ICO futhi ngitshala kanjani kuyo? Yimaphi ama-cryptocurrensets azokhuphula inani lawo kakhulu ezinyangeni noma eminyakeni ezayo?
Yonke le mibuzo yileyo abantu abaningi abazibuza yona nsuku zonke futhi kusuka ku-Actualidad Gadget sizokusiza ukuthi uqonde lo mkhakha omusha ngangokunokwenzeka.
Izindatshana ezibalulekile mayelana nama-Cryptocurrensets
Uma uqala emhlabeni wama-cryptocurrensaries ngaleso sikhathi lezi zihloko zizokusiza kakhulu.
Qalisa Bitcoin: yini i-Bitcoin, isebenza kanjani nokuthi ungathenga kanjani ama-bitcoins
Thenga u-Ethereum: yini i-Ethereum nokuthi ungathenga kanjani ama-Ethers.
Thenga iLitecoin: yini i-Litecoin nokuthi ungayithenga kanjani
IHashflare, ifu yesikhulumi sezimayini se-cryptocurrency.
Izindaba ze-Cryptocurrency kanye nezifundo
Thola ifayela le- izindaba zakamuva ze-cryptocurrency kanye nezifundo ukwazi ukutshala imali futhi usebenze kulo mkhakha ngesiqinisekiso esigcwele.
Izikhathi zokwehla kweBitcoin, isikhathi sokutshala imali?
Por UMiguel Gaton kwenza iminyaka 2 .
Ngemuva kwakho konke ukwehla nokwehla okuhambisane nempilo yama-cryptocurrensets kuwo wonke umlando wayo, ...
Yini i-cryptocurrency ongayithenga ukuqala ukudala iphothifoliyo yethu yezimpahla ze-crypto
Por Izindaba zamagajethi kwenza iminyaka 2 .
Yize kungadingeki uhlale njalo njengentuthwane eyisaga endabeni, akunangqondo ukwenza njenge-cicada kuphela, futhi ...
Ama-dollar angcono noma ama-cryptocurrensets?
Ama-cryptocurrensets kudala ashiya i-niche yelukuluku nje ukuze abe, ngokwabo, abe ...
I-United States iphenya ukukhohliswa kwamanani okungenzeka ku-Bitcoin
Por U-Eder Esteban kwenza iminyaka 4 .
Imakethe ye-idijithali yemali, neB Bitcoin eholayo, ayinayo unyaka omuhle kakhulu. Inani lawo liwile ...
I-Facebook ihlela ukwethula i-cryptocurrency yayo
Ukushesha kwe-cryptocurrency akukapheli. U-2018 akaqinisekisi ngokuphelele ngale makethe, ...
I-Facebook ilungiselela ukuhlukaniswa okusha kwe-blockchain
Kulezi zinyanga sibona ukuthi zingaki izinkampani ezibheja kwiBlockchain, abaningi abazibona njengobuchwepheshe bakusasa. Nakho…
I-Telegram ikhansela i-ICO yayo ngemuva kokuqongelela i-1,7 billion dollars
Esikhathini esithile esedlule iTelegram imemezele ukungena kwayo emakethe ye-cryptocurrency nge-Gram. Ukuqala le phrojekthi, ...
ICoinbase ivimba i-akhawunti ye-WikiLeaks
Ukubuyiselwa emuva okukhulu kwe-WikiLeaks. Kusukela i-akhawunti abanayo eCoibase ivinjiwe. Isinqumo ...
IPlattsburgh Iba Idolobha Lokuqala Lokuvimbela Izimayini zeBitcoin
Ukushesha kwe-cryptocurrency kubonakala kungakafiki ekugcineni. Njengoba abasebenzisi abaningi beqhubeka nokumba i-Bitcoin ...
Umvukuzi we-Cryptocurrency uphazamisa ukusesha impilo yangaphandle
Por U-Ignacio Sala kwenza iminyaka 4 .
Kuwo wonke u-2017, sikwazile ukubona ukuthi ama-cryptocurrensets, afana neBitcoin, Ether nezinye, adubule kanjani kakhulu ...
I-Russia ibopha onjiniyela abaningana ngokusebenzisa i-supercomputer ukwenza imayini i-bitcoin
Iqembu lonjiniyela abasebenza eFederal Nuclear Center eRussia, okuyisikhungo esiyimfihlo esikhulu senuzi, bebe ...